နီကိုးလ် Prause အတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုလား။ သိသာသော sockpuppets ၅၀ ကျော်သည်သူမ၏ဘက်လိုက်မှု၊ မုသားနှင့်အသရေဖျက်မှုတို့ဖြင့်ဝီကီပီးဒီးယားကိုတည်းဖြတ်သည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
နီကိုးလ် Prause အတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုလား။ သိသာသော sockpuppets ၅၀ ကျော်သည်သူမ၏ဘက်လိုက်မှု၊ မုသားနှင့်အသရေဖျက်မှုတို့ဖြင့်ဝီကီပီးဒီးယားကိုတည်းဖြတ်သည်။
ဝီကီပီးဒီးယားသည် sockpuppet အကောင့်များကိုတားမြစ်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်းတို့အားညံ့ဖျင်းစွာစစ်ဆေးသည်။ ဒါ့အပြင် sockpuppet အကောင့်တွေရဲ့အထောက်အထားတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးပိတ်ပင်ထားရင်တောင် cheat ရဲ့တည်းဖြတ်မှုကိုအမြဲမပြောင်းလဲပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ဘက်လိုက်သောဝီကီပီးဒီးယားမှပံ့ပိုးသူများသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဥများကို Wikipedia အသိုက်ထဲတွင်ထည့်ရန်အကောင့်အသစ်များဖန်တီးရန်အားကြီးသောမက်လုံးရှိသည်။ "ရာဇဝတ်မှု" ဒီဥပမာထဲမှာချေ။
ထိုမျှမက၊ ဝီကီပီးဒီးယား၏အယ်ဒီတာများသည်လိင် / ညစ်ညမ်းမှုလုပ်ငန်းကိုစိတ်အားထက်သန်စွာမြှင့်တင်ပေးပြီးသက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာများသို့ပိုမိုမျှတပြီးတိကျသောရှုထောင့်ကိုဆောင်ကြဉ်းပေးမည့်မည်သည့်ပြင်ဆင်မှုများကိုမဆိုမကြာခဏပြန်ပြောင်းလိုက်သည်။ ဝီကီပီးဒီးယားကိုတည်ထောင်သူ Jimmy Wales သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် X-rated မီဒီယာ။ ဟုတ်ကဲ့၊
စက်မှုလုပ်ငန်းမှရှုံးသောအခါသုတေသနချက်ချင်းထုတ် edited ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အားနည်းသော်လည်း၊ ချို့ယွင်းချက်များရှိသော်ငြားလည်းလယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သောသဘောတူညီမှုကိုမှားယွင်းစွာထင်မြင်စေသည့်ချယ်ရီကောက်ယူသည့်သုတေသနကိုမြှင့်တင်သည်။ ရလဒ်မှာအခြားသူများအကြားအပြာနှင့်လိင်အလုပ်များနှင့်ပတ်သက်သောအန္တရာယ်များကိုအလွန်စိတ်မချရသောစာမျက်နှာများဖြစ်သည်။
သတင်းထောက် Sharyl Atkisson အပါအ ၀ င်အခြားသူများကအလားတူပုံပျက်မှုများကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သူမရဲ့အပိုင်းအစကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့ဝီကီပီးဒီးယား၏အမှောင်ဘက်။ " ဒါ့အပြင်အန်း Bartow ရဲ့စဉ်းစားပါ မီချီဂန်ဥပဒေပြန်လည်သုံးသပ် ဆောင်းပါးလူငယ်တစ် ဦး အဖြစ်အင်တာနက်၏ပုံတူ"(link ကို PDF ကိုသွားသည်) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုထောက်ခံအားပေးသူ Peter G. Werner (တစ်ခါတစ်ရံ Iamcuriousblue ဟူသောအမည်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သူ) သည် Melissa Farley၊ Catharine MacKinnon နှင့် Sheila Jeffries ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုရန်နှင့်သူတို့၏ကာကွယ်သူများအားပစ်ပယ်ထားခြင်းမှ Wikipedia ရေးသားချက်များကိုအကြီးအကျယ်တည်းဖြတ်ခဲ့ကြောင်း Bartow ကတင်ပြခဲ့သည်။
လိုလားသူလိင်စိတ်ပညာရှင် နီကိုးလ် Prause ဒီအကျင့်ပျက်ပတ်ဝန်းကျင်၏အပြည့်အဝအားသာချက်ယူတော်မူပြီ သူမနှင့်တူသောဝီကီပီးဒီးယားအကောင့် ၅၀ ကျော်ကိုစာရင်းတွင်တွေ့နိုင်သည် ဒီစာမျက်နှာရဲ့အောက်ဆုံး။ ၎င်းကိုသူမအလွန်အမင်းဘက်လိုက်မှုအားဖြင့်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပြီးသူတည်းဖြတ်သည့်အချိန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူသည် Wikipedia တွင်သူတည်းဖြတ်ခဲ့သည့်တူညီသောအကြောင်းအရာများကိုမကြာခဏတွစ်တာရေးသားခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာသူ့ရဲ့တွစ်တာကိုတိုက်ခိုက်တုန်းကသူတို့ရဲ့တူတူလူနဲ့သူတို့ရဲ့လိင်နဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုကိုထောက်ပြလိုသူကိုတိုက်ခိုက်တယ်။
အစီအစဉ် - မောင်းနှင်ထားသော Wikipedia တည်းဖြတ်သူ Tgeorgescu ထို့နောက်ပိုမိုတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားသူမည်သူမဆိုထံမှပြင်ဆင်မှုများကိုပြန်ပြောင်းနေစဉ်သူမ၏တည်းဖြတ်မှုများကိုဖျက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ Prause နှင့် Tgeorgescu တို့၏စွဲလမ်းမှုမှဥပမာအချို့ ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာ Nofap, အဘယ်သူ၏အမှား - ဖြည့်အကြောင်းအရာအကြီးအကျယ်သိသာ Prause sockpuppets အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့သည်။ ဤဥပမာတွင် Tgeorgescu သည်အရှက်ကင်းမဲ့စွာအကာအကွယ် ပေး၍ Prause ၏ sockpuppets (အထူးပြု) ၏
ဤဥပမာတွင် Tgeorgescu သည် NoFap နှင့်ပတ်သက်သည့်ပိုမိုတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များပါ ၀ င်သောပြင်ဆင်ချက်များကိုပြန်လည်ရယူသည် (သုည) ။
အတော်လေး tag အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့! Tgeorgescu ဝီကီပီးဒီးယားရှိ“ ဆွေးနွေးရန်” စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအလိုဆန္ဒများကိုသူကိုယ်တိုင်အလွန်အမင်းတိကျမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ဥပမာ, ဒီမှာ သူက "porn စွဲသည်အမုန်းစကားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်စတင်ဖွဲ့စည်းချိန် မှစ၍ ပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်တံဆိပ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ရောဂါပိုးမွှားများ၊ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏ဇာတ်ကြောင်းသည်သိသာထင်ရှားသည့်ဆေးဝါးနှင့်ပင်ကိုယ်မူလသိပ္ပံနှင့်မဆိုင်သောအကြောက်လွန်ရောဂါပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီဖြစ်သည်။ Tgeorgescu သည်ဆေးစွဲသူများအားတရားဝင်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ရောဂါလက္ခဏာသစ်တွေ့ရှိမှုကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။ compulsive လိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ။ အဲဒီအစားသူကသံသယဖြစ်ဖွယ် porn shills အားဖြင့်ပူးတွဲရေးသားအပြင်ထွက်လေ့လာလေ့လာမှုများနှင့်ချိတ်ဆက်။
ယခုသင်ဖတ်နေသောဆောင်းပါးအပြီးတွင် Tgeorgescu နှင့် Prause sockpuppet အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေသည်။Jammoth) မှပူးပေါင်း 'နီကိုးလ် Prause' Wikipedia စာမျက်နှာကိုကာကွယ်ပါ (မတ်လ ၂၊ ၂၀၂၁) ။ တစ်နာရီ sockpuppet ၏မည်သို့မည်ပုံသတိပြုပါ Jammoth Tgeorgescu မှ Prause ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်ခြင်းကသူသည်သူမ၏စောင့်ရှောက်မှုခံယူကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
နီကိုးလ်ချီးမွမ်း၏တစ် ဦး တည်းသောအပိုင်း၌ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာTgeorgescu ကဒုတိယမြင်သာတဲ့ Prause sockpuppet ကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။မြဝတီ) ရဲနှင့် FBI စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများရှိသည်ဟုမှားယွင်းသောပြောဆိုချက်များနှင့်အသရေဖျက်မှုအောင်ပွဲသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိဟုပြောဆိုခြင်း။ Tgeorgescu သည် Prause's ကိုရည်ညွှန်းနေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆရမည် 8 နှစ်အရွယ်နတ်သမီးပုံပြင် LAPD နှင့် FBI မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေသည် ဂယ်ရီ Wilson က, အဲလက်စ်ရော့ဒ် နှင့်သူမ၏အမှား၏လုပ်ကြံဘို့အခြားသူများ။ လုယူသောသူသတိပေးချက်: အဘယ်သူမျှမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဆက်လက်နေကြသည်။ မည်သူမဆိုလိမ်လည်ရဲအစီရင်ခံစာကို file နိုင်ပါတယ်။ ချီးမွမ်း သေချာပါတယ် သူမဖြစ်ခဲ့သည် အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်တရားရုံးတစ်ခုမှာထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းခံရတယ်။ ထို့အပြင် Tgeorgescu သည်သူက“ ငါ့ရဲ့ဒုတိယတရားဝင်အောင်ပွဲကိုရည်ညွှန်းနေပုံရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းဟာအသရေဖျက်မှုကိုအနိုင်ရရင်တောင်ထောင်ထဲမှာတစ်ယောက်ယောက်ကိုထောင်ချနိုင်တယ်။ ပြနာကငါ့ပါ ပထမ ဦး ဆုံးတရားဝင်အောင်ပွဲ Prause သည်ကျွန်ုပ်မဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြပြီး Prause သည်ကျွန်ုပ်အားနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်တရား ၀ င်ဥပဒေကြောင်းအရတရား ၀ င်စနစ်ကိုအလွဲသုံးစားပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ့ 2nd တရားဝင်အောင်ပွဲ Prause သူမ၏လုပ်ကြံသားကောင်အကြောင်းကိုမုသာစကားကိုတစ်ဖန်အတည်ပြုခဲ့သည်
မေးခွန်းမေးခွန်း - သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြောဆိုသော Tgeorgescu သည်အဘယ်ကြောင့်ဘာသာရေးဖြစ်ပြီး 'Nicole Prause' ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုအလွန်ရဲရင့်စွာဝါဒဖြန့်သည်။
ဝီကီပီးဒီးယားသည်“ ဘေးအန္တရာယ်များ” ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားသည်NeuroSex"နှင့်၎င်း၏ aliases
တစ်ကြိမ်မှာဝီကီပီးဒီးယားကိုယ်တိုင် အကောင့် ၉ ခုကိုပိတ်ပင်ထားသည် သူမကသူမရဲ့ "Neurosex" အကောင့်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ် အဲဒီအချိန်တုန်းက သို့သော်သူမသည် ထိုအချိန်မှစ၍ သူမ၏ sockpuppet အကောင့်အသစ်များဖန်တီးမှုကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါ။ အမှန်မှာ၊ ဝီကီပီးဒီးယားသည်နောက်ထပ် ၈ ခုကိုဖော်ပြခဲ့သည် သံသယရှိ NeuroSex နာမည်ပြောင် မူရင်း9အပြင်!
ဒီနေရာမှာ 8 ဖြစ်ကြသည် အတည်ပြုပြောကြား Wikipedia မှပိတ်ပင်ထားသော NeuroSex ၏ sockpuppets: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Wikipedia_sockpuppets_of_NeuroSex
ဒီနေရာမှာအပိုဆောင်း 8 ဖြစ်ကြသည် သံသယရှိ ဝီကီပီးဒီးယားတွင်စာရင်းပြုထားသော NeuroSex sockpuppets: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Suspected_Wikipedia_sockpuppets_of_NeuroSex:
ဝီကီပီးဒီးယားတွင်တွေ့ရှိရသောတရားမဝင်အကောင့်များအားလုံးသည် Prause Sockpuppet Iceberg ၏အစသာဖြစ်ကြောင်းအောက်ဖော်ပြပါစာရင်းမှတွေ့ရှိရသည်။
“ NeuroSex” သည်နီကိုးလ်ပရပ်စ်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား
NeuroSex သည် Prause ဖြစ်ကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ ပထမ ဦး စွာ NeuroSex ၏မေလ ၂၄ ရက်မတိုင်မီတည်းဖြတ်ခြင်း တစ်ခုမအောင်မြင်ကြိုးပမ်းမှုခဲ့သည် မထုတ်ဝေသေးသော YouTube အကြောင်းဗီဒီယိုထည့်ရန်orgasm တှေးတောဆငျခွအဆိုပါပေါ်သို့လေ့လာပါ ဝီကီပီးဒီးယားရှိ 'နီကိုးလ်အကဲဖြတ်မှု'.
NeuroSex သည့်အခါ ပို၍ ပင်ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများရောက်ရှိခဲ့သည် Wikipedia မှကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ကိုယ်ပိုင် Prause နှင့် MDPI မှအရာရှိများအကြားအီးမေးလ်များ - ထိုနေ့တွင်ပင်အီးမေးလ်များကိုပို့ခဲ့သည်။ ငါ (ဂယ်ရီ Wilson) Prause နှင့် MDPI အရာရှိများအကြားရှိဤအီးမေးလ်အားလုံးတွင်ကူးယူထားသောကြောင့်ငါသိသည်။ သူမလည်းမကြာမီလာမည့်အကြောင်းကိုသိတယ် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ သူမအောင်မြင်စွာကြိုးကိုင်ခဲ့သောဆောင်းပါး။ စကားမစပ်ထဲမှာ, သူမ လိမ်ညာ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ အားလုံးနီးပါးအကြောင်းကို။
Prause ၏ဝီကီပီးဒီးယား sockpuppets များကဲ့သို့ NeuroSex ၏တည်းဖြတ်မှုသည် Prause ၏ရေရှည်၊ နောက်ဆုံးတွင်မအောင်မြင်သော၊ စွဲလမ်းမှုများဖြစ်သော Gary Wilson နှင့် US ရေတပ်ဆရာဝန်များပူးတွဲရေးသားထားသောစာရွက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်ကြိုးစားခြင်း - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (ပန်းခြံ et al ။ , 2016) ။ MDPI နှင့်နီကိုးလ် Prause အကြားအီးမေးလ်များသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မေလ ၂၂ ရက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ MDPI မှအသေးစားနည်းပညာဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုနှင့်သူမ၏ကျွမ်းကျင်မှုကင်းမဲ့သောအပြုအမူကိုဖော်ပြသည့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့လာတော့မည်ဖြစ်သည်။ တောင်းဆိုမှုများနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုတုန့်ပြန်သော Prause အားဒေါသထွက်စေခဲ့ပြီး၊ နောက်တွင်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် MDPI Wikipedia စာမျက်နှာကိုအခြေအနေကိုလွဲမှားစွာဖော်ပြရန်တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ Prause သည်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းပုံနှိပ်ခြင်းကိုနှိမ်နင်းရန်သူမကြိုးစားခဲ့သည့်အကြံအစည်တိုင်းကိုမည်သို့အသုံးပြုခဲ့ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသောအဖြစ်အပျက်ကိုသင်ပိုမိုသိလိုလျှင်၊ Park et al၊ မြင် ရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ သုံးသပ်ချက် (ပန်းခြံ et al ။ , 2016) ပြန်ရုပ်သိမ်း။ အစောပိုင်း 2021 ၏အဖြစ်, ပန်းခြံ et al။ ခဲ့ 85 ကျော်ကတခြားသက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများအားဖြင့်ကိုးကားနှင့်ဖြစ်ပါသည် အများဆုံးကြည့်ရှုအားပေးစက္ကူ အဆိုပါဂျာနယ်များ၏သမိုင်းမှာ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ။
၂၀၁၉ ဇွန်လတွင်ကုမ္ပဏီ၏မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည် အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ သတင်းစာ, MDPI သည် Prause ၏မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ မကျေနပ်သောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် ပန်းခြံ et al။ , 2016 ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည် ၂၀၁၀ ဇွန်၊ ဇွန်လ - MDPI သည်နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်၏ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောအပြုအမူဆိုင်ရာအယ်ဒီတာ့အာဘော်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေသည်.
MDPI သည်တရားဝင်တုံ့ပြန်မှုများကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် MDPI ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာMDPI ကိုမှားယွင်းသောပြောဆိုမှုများနှင့်အယောင်ဆောင်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အဖွဲ့များ၏ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဤရွေ့ကားမဆန်သောအဖွဲ့အစည်းများသည် Wikipedia နှင့် ပတ်သက်၍ MDPI ၏လေ့လာမှုများကို Wikipedia မှကိုးကားခြင်းကိုတားဆီးရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၀ ဇွန်၊ ဇွန်လ - MDPI ၏ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်မှု (၎င်းကိုနီကိုးလ် Prause sockpuppets တည်းဖြတ်သည်).
50 + သံသယရှိသော Prause sockpuppet aliases များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် (သို့သော်ဤစာရင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသည်ဟုထင်စရာအကြောင်းမရှိပါ) ။
အလားအလာ Prause sockpuppet:
Prause ၏မြောက်မြားစွာသောရုပ်သေးရုပ်များကဝီကီပီးဒီးယားတွင်တည်းဖြတ်ထားသည့်မှားယွင်းသောမှားယွင်းမှုများနှင့်ဝါဒဖြန့်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည်အချိန်ပြည့်အလုပ်ဖြစ်မည်၊ စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး။ YBOP သည် Prause ၏သံသယရှိသော Wikipedia Wikipedia subterfuge ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၆၊ Aprilပြီလ - နီကိုးလ်ဆိုသည့်ရုပ်သေးရုပ်သည် Belinda Luscombe Wikipedia စာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်သည်။
ဇန်နဝါရီလ, 2017 (အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသော): Prause ဝီကီပီးဒီးယားကိုတည်းဖြတ်ရန် ( "NotGaryWilson" အပါအဝင်) အများအပြားကိုအသုံးပြုသူအကောင့်န်ထမ်း
မေလ ၂၄-၂၇၊ ၂၀၁၈– MDPI Wikipedia စာမျက်နှာကိုအသရေဖျက်ရန်သုံးစွဲသူအမည်များစွာကိုဖန်တီးသည် (အသရေဖျက်မှုနှင့်ရုပ်သေးရုပ်ကိုတားမြစ်သည်) ။
မေလ ၂၀၁၈ မေလတွင် - GDP Wilson နှင့် ပတ်သက်၍ MDPI၊ David Ley၊ Neuro Skeptic၊ Retraction Watch မှ Adam Marcus နှင့် COPE တို့၏အီးမေးလ်များဖြင့်ဖော်ပြသည်။
မေလမှဇူလိုင်လ ၂၀၁၈၊ အီးမေးလ်များ၊ ICD-2018 မှတ်ချက်များအပိုင်းနှင့်ဝီကီပီးဒီးယားတွင်၊ Prause နှင့်သူမ၏ sockpuppets များသည် Wilson သည် Reward Foundation မှပေါင် ၉၀၀၀ ရရှိသည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။
မေလ ၂၄-၂၇၊ ၂၀၁၈– Prause သည် NoFap Wikipedia စာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်ရန် sock-puppets များစွာကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၈ အထိ - ရှိသည်ဖို့ Prause ၏သိက္ခာမဲ့သောကြိုးပမ်းမှုများ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်း (ပန်းခြံ et al ။ , ၂၀၁၆) ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည် (သူမအောင်မြင်ခဲ့)
မေလ ၂၄-၂၇၊ ၂၀၁၈– ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာများတွင်“ လိင်စွဲလမ်းမှု” နှင့်“ စွဲလမ်းမှု” ကိုတည်းဖြတ်ရန် Sra-puppets အမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ။ ။ ထွက်မြောက်ရာ Cry ကိုလိမ်လည်သည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်။ တွစ်တာနောက်လိုက်များကိုအမြတ်အစွန်းမယူသောမစ်ဆူရီရှေ့နေချုပ်ကို အကြောင်းပြ၍ တောင်းပန်သည် (အကြောင်းပြချက်များကြောင့်) CEO ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်သည်။
မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ Prause ၏ sock-puppets များသည် Fight The New Drug Wikipedia စာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်သည်။ Prause သည်သူမ၏ sock-puppets ၏တည်းဖြတ်မှုမှအကြောင်းအရာများကိုတစ်ပြိုင်တည်းတွစ်တာတွင်ပြုလုပ်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြီမှမေလ - NeuroSex sockpuppets (SecondaryEd2019 & Sciencearousal) နှစ်ခုသည် Wikipedia ကိုတည်းဖြတ်ပြီး RealYourBrainOnporn.com link များနှင့် Prause ကဲ့သို့သောဝါဒဖြန့်ခြင်းများကိုပြင်ဆင်သည်။
၂၀၂၀၊ သြဂုတ်။ @BrainOnPorn (Prause) ရေးသားချက်များသည် Brian Watson ၏အမှားအယွင်းနှင့်ပြည့်နေသောထိခိုက်နစ်နာမှုမှဖြစ်သည်။ ထို့နောက် Prause က Watson ၏မှားယွင်းမှုကို Nofap Wikipedia စာမျက်နှာသို့တည်းဖြတ်သည်.
၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လ။ အသစ်သောအကောင့်အသစ် ၅ ခု (ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကောင်းသော sockpuppets) သည် Nofap Wikipedia စာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်သည်။ မကြာသေးမီက Prause & @BrainOnPorn မှ Tweet လုပ်ခဲ့သည့်မှားယွင်းသောမှားယွင်းမှုများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်နှစ် ဦး စလုံးသည်ဝီကီပီးဒီးယားကို အသုံးပြု၍ နာတာရှည်သတင်းမှားများကိုပြုပြင်ရန် Tgeorgescu နှင့်သူ၏အဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ (ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ဘာသာရေး” အရဖြစ်ပျက်နေသောအရာများ) ကိုလှည့်ဖြားနေသောအခါ Tgeorgescu ကကျွန်ုပ်တို့၏တည်းဖြတ်မှုများကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြောကြားခဲ့သည် အမှား ငါတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြား "sockpuppets" ခဲ့ကြသည်! ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝီကီပီးဒီးယားတွင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ကြောက်စရာမကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုများအားပြုပြင်ရန်အတွက်အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ သို့တိုင် Tgeorgescu သည် Prause ၏ 50+ sockpuppets ၏မှတ်ချက်များအားလုံးကိုထောက်ခံသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားဟာအကျင့်ပျက်နေတယ်၊